Boky namboarina, Kitapo taratasy manokana, boaty vita amin'ny taratasy manokana - SmartFortune
SmartFortune Packaging Co. Ltd dia mpanamboatra fanontam-pirinty sy fonosana any Shina izay manam-pahaizana manokana amin'ny famokarana boky pirinty isan-karazany, boaty namboarina, kitapo vita amin'ny taratasy sns vokatra vita amin'ny taratasy.
Ny orinasanay dia miorina ao an-tanàna DongGuan, faritanin'i GuangDong, Sina; Akaiky ny HongKong, ShenZhen ary GuangZhou izy io, adiny iray monja amin'ny fiara.
Manana mpiasa mahay 360 eo ho eo izahay, ary manararaotra ny zavatra niainanay efa ho 25 taona, afaka nanome vahaolana maivana ho an'ny mpanjifa izahay amin'ny vidin'ny orinasa mpifaninana sy ny fandefasana azy ireo haingana any am-baravarana.
Mifandraisa aminay azafady mba hahazoanao ny teny nalahatrao, hamaly anao izahay raha vao haingana.
Kitapo taratasy manokana
boky kilalao Sound mahazatra ho an'ny ankizy
boky tantara fandokoana sary
fanontana boky mahandro sakafo
amboary boaty baoritra aforitra
mamokatra boaty baoritra misy varavarankely PVC
ambongadiny boaty fanomezana
mamoaka boaty fanomezana Chocolate
ambongadiny kitapo taratasy kraft
mamokatra orinasa mpivarotra kitapo taratasy fiantsenana
Ny tombony fototra
Tehirizo ny vidinao amin'ny traikefanay mihoatra ny 25 taona amin'ny indostrian'ny fanontana sy ny fonosana.
Valio haingana ny fanontanianao -Raha tianao, mety ho 24 ora an-tserasera ho anao.
Manomeza fanampiana ho an'ny famolavolan'ny zavakanto ny bokinao manokana, boaty namboarina ary kitapo manokana.
QC mifehy tanteraka ny dingana rehetra mandritra ny famokarana betsaka ho an'ny kalitao tsara
Hihaona amin'ny daty fandefasana haingana ilaina raha te-mpanjifa
Valiny haingana amin'ireo fanontaniana na olana aorian'ny fivarotana raha misy
Fanontana fonosana miaraka amin'ny fitaovana fonosana isan-karazany
Kaontenera na fonosana, ary asa fanaingoana ny entana. Ny fonosana dia ny fitohizan'ny fizotry ny famokarana entam-barotra amin'ny fizotry ny fizaran-tany, ary izany dia fepetra tsy maintsy ilaina hidiran'ny entam-barotra amin'ny sehatry ny fivezivezena sy ny fanjifana. Ireto ny asan'ny fonosana ...
Inona ny politika i Shina hanohanana ny fampandrosoana matanjaka ny indostrian'ny fanontana sy ny fonosana?
Inona ny politika i Shina hanohanana ny fampandrosoana matanjaka ny indostrian'ny fanontana sy ny fonosana? Satria ny indostrian'ny fanontam-pirinty sy ny fonosana dia manana fahaiza-manao mitroka ny asa, ary ny haavon'ny fandotoana ny tontolo iainana dia somary ambany, ny governemanta nasionaly sy ny eo an-toerana dia manana ...
Inona no fantatrao momba ny fenitra fiarovana ny tontolo iainana amin'ny fanontana boky ho an'ny ankizy?
Ny tsenan'ny fanontam-pirintin'ny ankizy any Shina dia nanjary nambinina kokoa satria ny ray aman-dreny dia mandinika bebe kokoa ny famakiana ary mihamaro ny ray aman-dreny mifantoka amin'ny famakiana. Isaky ny mampiroborobo ny fivarotana an-tserasera dia mahatalanjona foana ny angon-drakitra fivarotana an'ny bokin-jaza. Ao amin'ny ...
-From SmartFortune Sina Education dia namoaka ny "Taratasy Fotsy momba ny fanjifana ny fianakavianan'ny fianakaviana shinoa" 2017 (izay antsoina hoe "White White") andro vitsy lasa izay. Ny "Taratasy Fotsy" dia mampiseho fa ny tahan'ny fihinanana fampianarana an-trano dia mitohy ...